Andriamifidisoa Zo · Aogositra 2010 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Aogositra, 2010
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Aogositra, 2010
Alzeria: Melohin'ny mpiserasera ny fanakanana ny boky ejipsiana tsy haseho ao amin'ny fampirantiana boky
Alzeria 26 Aogositra 2010
Sarim-pamantarana ny Salon International du Livre d’Alger (SILA): http://www.sila.dz/ Tsy nahafaly ny Alzeriana ny fanapahan-kevitra tsy hampiditra ny boky ejipsiana ho ao anatin'ny haranty mandritra ny Fampirantiam-boky Iraisam-pirenena eto Alger [Salon international du livre d’Alger (SILA)]. Nisy manko ny antsoavo nataon'olo-tsotra avy amin'ny sarangam-piaraha-monina rehetra nanameloka ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitry...
Afrika Mainty 23 Aogositra 2010
Afghanistan : saripikan'ny mpamaham-bolongana ivelan'ny ady sy ny Wikileaks
Afganistana 12 Aogositra 2010
Amin'ny alalan'ny fanehoana an-tsary ny endrika isan-karazan'ny fireneny no amoahan'ny mpamaham-bolongatsary Afghan izany Afghanistan ankoatra ny ady sy ny Wikileaks. Nasim Fekrat, ilay mpamaham-bolongana Afghan efa nahazo loka no manolotra antsika ny endrika kanton'i Afghanistan – firenena meva tontolo voahary – sy ny endrika “mikentrona” ao aminy, ny fahantrana. Afghanistan Meva...
Venezoelà: Fampiroboroboana ny zavakanto tsotra amin'ny alalan'ny bolongana
Amerika Latina 11 Aogositra 2010
Any Venezoelà, ny zavakanto tsotra no fomba fanehoana ny fomba fijery mety indrindra ataon'ny fiaraha-monina hanehoany ny hakanton'ny manodidina azy. Araka ny famaritana dia matetika no tsy misy anaran'olona voatonona ho tompon'ireny na niavian'ireny zavakanto tsotra ireny. Ny mpahay tantaran-javakanto Ricardo Ruíz avy amin'ny Anjerimanontolon'i Los Andes [es] dia mametraka...
Venezoelà: Fetiben'ny bolongana sy fahalalaham-pitenenana an-tserasera
Amerika Latina 09 Aogositra 2010
Ny Global Voices teny Espaniola dia te-handrisika ny famahanam-bolongana sy hanondro-daza ny mpamaham-bolongana amin'ny alalan'ny “Festival des Blogs” na fetiben'ny bolongana. Avy amin'izay fomba izay no hahafahan'ny GV teny Espaniola mandray anjara mba hahitana [hamoronan'ny mpamaham-bolongana] zava-baovao misy fanadihadiana sy famakafakana avo lenta. Hahazo tombon-dahiny amin'ny mora hahitana kokoa izay...
Amerika Avaratra 01 Aogositra 2010
Madagasikara 01 Aogositra 2010